Forum serasera malagasy Mitady vahaolana fa manana olana ara tokatrano - Dinika forum.serasera.org
Mitady vahaolana fa manana olana ara tokatrano
Fitohizan'ny hafatra : Mitady vahaolana fa manana olana ara tokatrano
Anni - 15/03/2017 14:53
Misaotra mialoha@ faharetana mamaky. dia miala tsiny fa somary lavalava ilay tantara.
Vehivavy mananbady aho ary niteraka 1 izahay, misedra olana ny tokantranonay…
Ra fehezina dia efa hatramin’izahay mbola mpisipa no efa nisedra olana fona izahay, 4 taona izao no niarahanay.Samy niasa tany @ faitany izahay no nanomboka niaraka, t@ izany dia vao niaraka kely² izahay dia tsapako fa nisy toetrany tsy tiako, tsy tiany miaraka @ namako aho,somary nofefeheziny, tsy dia avelany mivoka ny trano firy aho rehefa tsy miasa, hany ka lasa nanomboka te hisaraka taminy aho.Nanomboka notoheriko avokoa ny zavatra tsy tiany vao maika ataoko, eny hatramin’ny fampirafesana,nataoko ary tsy nafeniko azy.Nampalahelo azy zany fihetsiko zany, tao anatin’izany anefa dia novoaboasako taminy avokoa ny toetrany tsy tiako.
Nanomboka teo dia korontan-dava ny fiainanay satria dia tsy nanaiky ny hisaraka t@ko izy. Nalahelo azy aho tao anatin’izany ary nanapa-kevitra aho ny hisaraka t@ ilay rafiny ka nisafidy ny hanoy ny fiarahana taminy.
Taoriana kely anefa dia nanomboka namely ratsy ahy koa izy ka nampirafy ahy, tsy ferana ny ady sy disa² matetika hatramin’ny fikasian-tanana t@ay.
Tsy nitsahatra ny nifona taminy ihany koa aho tao anatin’izany. Ny zavatra tsapako dia tsy mifankafoy izahay roa nefa nefa koa tsy nety nifamela madio, indrindra fa izy.
Nande ny fotoana, niezaka nitady asa taty tana za ka naita dia nifindra taty. Talohan’ny nandianako dia tsy nitsahatra ny nitomany izy oe malahelo ahy, tsy mahafoy ahy…eny atramin’ny hoe tsy mbola nitomany olona izany izy, eny na t@ papany maty aza.
Nifindra taty tana za, 1 volana taorian’ny nahatongavako dia tonga koa izy.tsy niara-nipetraka izahay fa isakin’ny week-end kosa izy dia natory teny @nay.
Ny ady matetika mbola tsy miala aminay, eny hatramin’izao aza…
Nandeha ny fotoana, bevohoka aho, nifanaiky izahay fa hiteraka. NIroso t@ raharaha, 5 volana ny kiboko vita ny raha² dia nitoka-trano izahay.Nisafidy ny hipetraka ao @nay iany izahay au lieu de hanofa trano.Nande ny fotoana, ny ady lava manaraka eny iany.3 andro talohany iterahako niady zay d niala tao atrano izy (tsy noroasina).Chomage nanomboka volana Febroary-Jona izy t@zany dia izaho no napiti-bola tao atrano, izy tsy nanana tahiry oe mba ho kitihina.Izaho iany no nividy ny koja² rehetra niterahako…
Tsy nampilazako izy oe ho teraka aho satry efa fatany aho fa miandry andro tsy tokony nialany. Ny anabaviny no nilazako rehefa teraka soa amantsara aho ary nafarako izy hanao ny copie-ny zaza.
Tonga tao izy dia nanao mpitsidika fa tsy nanana eritreritra ny nody tao atrano .
2volana taty aoriana, nifandamina dia niverina izy.T@ izany anefa dia notakiny tanteraka ny hoe hanofa trano fa tsy hipetraka ao @ay intsony satria tsy tiany hono aho rehefa misy olana izahay dia tantaraiko @ havako fona dia mahazo tsiny fona izy.
Niady be izahay t@ Volana Janoary lasa teo, nikasy tanana mafy ahy izy ka tena kivy tanteraka t@ fietsiny aho dia nandroaka azy ary nilaza fa hisaraka aminy.
Nifona t@ko izy ary nilaza fa hiova tanteraka, hiala @ toetra ratsy izay tsy tiako ataony.
Rehefa miady manko izahay dia hatramin’ilay zaza avy no tsy rarahiany, tena tsy resahiny.Fihetsika izay tena mampalahelo ahy ataony…
Nanaiky ny fifonany aho ary dia nilamina tanteraka izahay, hatramin’ny zaza votambitamby tsara.
Miady indray anefa izahay nanomboka t@ zoma, tsy inona ny antony fa tratrako mandainga @ko izy, taloha izy miantsoi ahy fona isakin’ny pause midi, tatotato izay tsy nataony.Isaky ny antsoko izy dia milaza fa sahirana @ asany foana.Ary ny farany dia hoy izy hoe mbola tsy nampiditra credit mintsy aho..izay ny antony tsy amaliako ny bip-nao.
Ny ampitso maraina anefa refa nijery² ny findainy teo izy dia sendra itako fa niantso olona maro² ihany izy talohan’ny niantsoko azy, nefa izy milaza @ko fa tsy nampiditra credit.
Noteneniko t@ io laingany io izy d izy indray izy dia maita ala-olana (excuse) isankarazany….
Akoantr’izay, notabatabaiko ihany koa izy satria nisy fihetsika nataony halako iany ko, mistena ahy aty ampia sana izy dia taitairiny be aho mba hivoka fa misy bus malalaka hono ka dia noteneniko mafy noho izany izy.
Tezitra izy ankehitriny oe maninona izy no betrobetrohoko mafy sns hany ka tsy miresaka amiko izy hatramin’izao.
Efa miezaka manantona azy aho fa ahiliny fona, tsy ilainy manantona azy hono aho fa hainy ny manantona ahy rehefa te hanantona ahy izy.
Mampalahelo ahy izany fihetsiny izany satria izaho dia olona tsy mahazaka mifampiavokavona izany @ fianana, na namana io na havana indrindra izy vadiko…
Mba te hamela azy @ safidiny aho nefa tsy mahatohitra fa manantona azy fona aho, nefa rehefa manantona azy aho dia vava mahery sy latsa² ny azoko.
Inona ny tokony ho ataoko?ny ao antokatrano moa d’efa izy no mintantana azy…taloha aza rehefa miady izahay dia tena tsy mametraka na ny 1ar izy…
Lava ny tantarako fa sombitsombiny io
Misaotra @ faharetana mamaky.
rhaj0 - 20/03/2017 17:35
Raha ny fahitako azy dia.. efa tena zava-dehibe ny nametrahanao an-tsoratra ny iainanao ao. Manampy anao izany
- hampazava tsara aminao ny zava-misy,
- hampazava tsara aminao ny ao am-ponao sy an-tsainao,
- ary indrindra koa ny fahatsapanao ny azy koa.
Raha ny dingana manaraka, raha mbola ny fahitako azy ihany, dia ... communication communication hono no lakile @ fiainana, ka dia ampitao aminy azany ireo soratrao ireo.
Ataoko hoe, samy olon-dehibe, na atao resaka olon-dehibe io, ary dia io, carte sur table io, dia izay andraisan'ny tsirairay eo ny baolina, tsisy atao an-tery, ary tsisy atao an-kalahelo, fa tsy maintsy miroso @ fiainana, ary mba samy miaro ny rambony tsy ho tapaka.
Io izao tena ho tsara raha vitainareo eo @ samy ianareo roaroa ao ihany. Fa rahefa sarotra izany, dia mila mpanelanelana ihany... Ny aty misy izany hoe marriage counsellor, na koa any @ psychologue.. fa any angamba zokiolona dia afaka "manelanelana".
Manelanelana ho'a fa tsy mi-imposer solution, satria dia tena ianareo roaroa ihany no erany.
Aandrianina1 - 14/05/2018 07:25
Itanao, ny vehivavy no mahay manadino s mamela ny heloky ny vadiny raha nampirafy izy, fa ny lehilahy kosa une fois ianao nanitsaka tokatrano dia mandrakize tsy voavela ny helokao,
Donc tôt ou tard tsy maintsy misaraka définitivement ianareo ary ts hisy tsony mints Zany tokatrano sambatra zany na mikiry hiaraka foana aza ianareo.
Pense -y dia mandraisa décision,
SINCER7 - 13/05/2020 15:56
Voalohany raha vao tsy misy toeran'i Jesoa Tompo ao antokantranonareo dia tsy miorina @ Vatolampy araka ny tenin'Andriamanitra.
faharoa manampotoana ho anareo manokana ve ianareo hiresahana manokana isan-kerin'andro.
Mifanakatia ianareo matoa mifandefitra na dia t@ pire sy meilleure aza fa mila kosa mifanakalo ny my se communiquer na mifampiresaka hoe inona no tiany sy tsy tiany ary inon no tiako sy tsy tiako ? Mila fotoana hirahana mivavaka ianareo ho an'ny couplenareo .
mividiana ny boky "Manan'ny mpivady" 1500Ar na 2000 Ar fotsiny ilay boky ao @ mpiara mamaky ny Baiboly ao an-taninarenina(na ligue pour le Lecture de la Bible ao Antaninarenina) dia manokana fotoana hiarahanareo mandinika azy ianareo roa sady mivavaka sy mametraka ny fiainareo mivady eo am-pelatanan'ny Tompo tsy mijery sy miamapanga ny iray fa mandinika fotsiny tsy manao hoe an'iza ny faute fa samy mijery ny tenany avy dia samy mitondra zavatra hoe inona no hanatsarako ny tokantranoko; inona no hataoko mba hahafaly ny vadiko ? (tsy mi accuser fa manetry tena eo ampelantanan'ny Tompo raha misy hitanao fa tsy mety nataon'ny vadinao dia eto eo anatrehan'ny Tompo @ vavaka izany) Matio 7:7 ary vonon na ny hitondra ny tsara foana eo @ vadinao sy ny tokantranonao. Tsy hitovy velively ny L sy ny V fa Andriamanaitra no namorona ny fnambadiana dia mila mahafantatra azy aloha isika izany no hamakiana Baiboly . Matoa nataon'Andriamanitra tafaraka ny olona roa ; vakio ny Genesisy 2 dia compléméntaire izy izay fa tsy tanteraka velively. Tys hitovy ny zavatra ataonao ny zavatra tiany . Ny L mety ecouteur fa ny V mety haut parleur dia mitambatra tel iray fa tsy mitovy ny asany fa misy hifandraisany sy hifanampiana ka mila mijery hoe "comment fonctionne ny ecouteur mba hahafahana mifanampy. Noh izany mila mijery ny caractereny nyzvtr tiany sy tsy tiany raha misy hadisoany dia ento eo anatrehan'ny Tompo ary hazavao hoe "mampalahelo" ahy @ fitiavana. Ny "haut parleur na ny micro" koa tokony hahay hijery tsara ny vatana iray aminy mba hahatonga ny message na ny telefaonina handeha tsara. raha tsy mifankazo ny tel sy ny haut parleur dia ilay tel na tokantrano mihintsy no maty dia ohatran'izany ny mpivady ; ny tokantrano no simba fa tsy hoe ny l na ny V. ka mila mifampiresaka; mandinika koa hoe inona no tian'ny vadiko ary hahasambatra azy ? tian'ny vadiko ve ilay tenenina lava sa izaho no mila miova ? raha misy toetrany tsy zakako ve dia tonga dia homenimenonako izy sa apetrako @ Tompo aloha dia ny Tompo no manome fahendrena ahy hiteny azy amùim-pitiavana. Raha misy toetrany tsy zakanao dia resaho @ Tompo aloha dia ny Tompo no manome fahendrena anao hiteny azy nefa miteny am-pitiavana tahaka ny nitiavanao azy voalohany. Mampisehoa fitiavana azy foana dia rahao ilay conseil hoe manana fotoana manokana hifampiresahana hoe izao ny tiako sy nys tsy tiako na dia 1 ora isan-kerin'andro ho anareo mivady irery. Misy boky mety hanampy ko ao @ mpiara-mamaky ny baiboly " Amour et Mariage" ; "je veux t'aimer"; "language d'amour" izay momba ny mpivady" ka tsara mijery an'iznay ao @ librairie mba hanan tokantrano sambatra hianareoa ary izay hatrany no tanjon' Andriamanitra tsy ny hampisaraka fa ny hahatonga ny mpivady ho feno fiadanana.(Filipiana 4:7)